Hilton munzira yekuwedzera kanopfuura kaviri tsoka dzayo mu Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Hilton munzira yekuwedzera kanopfuura kaviri tsoka dzayo mu Africa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ghana Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Malawi Breaking News • nhau • Nigeria Breaking News • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sezvo ichiri kuramba ichikura kuvepo kwayo muAfrica nekuunza mabhenji matsva uye kupinda munyika nyowani, Hilton (NYSE: HLT) nhasi yazivisa kuti iri munzira yekuwedzera zvakapetwa kaviri muhukuru mumakore mashanu anotevera nekuvhurwa kweLegend Hotel Lagos Airport, Curio Unganidzo naHilton - yekambani yekutanga Curio Kuunganidzwa neHilton hotera muAfrica.
Legend Hotel Lagos Airport iri paMurtala Muhammed International Airport, iyo inoshanda vanopfuura mamirioni masere vafambi gore rega. Ihotera inoyevedza iri padyo nendege yendege yakazvimiririra uye ine yakasarudzika yekupinda uye tsika tafura muhotera yevakazvimirira jet vafambi. Yakasarudzwa kuve chikamu chekuunganidzwa kwakasarudzika kweimwe-ye-ye-mhando mahotera uye nzvimbo dzekuchengetedza dzakapembererwa kune kwavo kwakasarudzika, hotera iyi inobatana inopfuura 60 Curio Unganidzo mahotera kutenderera pasirese. Iyi ndiyo hotera yekutanga yaHilton muLagos uye yechipiri muNigeria, iine mamwe mahotera manomwe mupayipi yayo yekusimudzira nyika.
Vachitaura pamberi pe Africa Hotel Investment Forum (AHIF) muNairobi, Mutungamiriri weHilton uye CEO, Chris Nassetta, akati: “Tiri kuramba tichivandudza muAfrica nemhando itsva uye zvigadzirwa, uye tinofara kuzivisa zita redu reCurio Collection pano ne kuvhurwa kweLegend Hotel Lagos Airport. Sezvo kondinendi iri kuenderera mberi nekukwira nekukurumidza kwemaguta, neUN ichifungidzira kuti maguta gumi epasi ari kukura nekukurumidza achave ari muAfrica panosvika 10, hotera iyi chikamu chehurongwa hwedu hwekubatanidza vaenzi kumaguta akakosha nenzvimbo dzendege mudunhu rese. ”
Hilton iri kuona kudiwa kwakasimba kwezvikwata zvayo munyika yose uye inotarisira kuvhura mahotera masere muAfrica yose gore rino, matatu acho achabhururuka pasi pemureza weHilton Garden Inn. Ichi chiratidzo chinokwidza kumhepo inokwira yevashanyi vepakati kupinda mu Africa nemhiri kwe Africa uye kambani inotarisira kuvhura angangoita 16 mahotera eHilton Garden Inn mumakore mashanu anotevera, kusanganisira mabhenji emagetsi muKampala, Ghana, Malawi, eSwatini (yaimbova Swaziland) uye dzakawanda dzimwe nzvimbo dzakarongeka munzvimbo dzesub-Sahara Africa.
Gore rapfuura, Hilton yakatanga chirongwa cheHilton Africa Growth Initiative, icho chinotsigira kushandurwa kwemahotera aripo kuenda kumakambani eHilton nemari inosvika US $ 50 miriyoni pamakore mashanu. Munguva iyoyo, Hilton anotarisira kuwana mikana zana yekushandurwa nemakamuri anosvika 100-15 akawedzerwa mupotifoliyo yake kusangana nezvinodiwa zvinokura zvemahotera emhando yepamusoro mukondinendi yose.
Hilton yakazvipira mukukura uye nemukana muAfrica yese uye kwave kungogara kuripo mukondinendi kubvira 1959. Iine makumi mana nematanhatu mahotera akavhurwa uye makumi mashanu nematatu mupombi yayo yekusimudzira muAfrica, Hilton inotarisira kupeta tsoka dzayo kudarika kondinendi mumakore mashanu anotevera. Izvi zvinosanganisira kupinda mumisika munyika gumi nenhatu uko kusingashande parizvino kusanganisira Botswana, Ghana, eSwatini (yaimbove Swaziland), Uganda, Malawi neRwanda.